Fitaovana adiresy validation - taratasy ho an'ny asa amin'ny XMailer 3.0
XMpandefa hafatra download
Eo ny tena
Ny fisokafan'ny varavarankely
Ny fidirana ho any amin'ny XMailer
Ny tena varavarankely
Fanoloana ny andinin-tsoratra masina
Banky angona ' ny mpandray
Ny kaonty banky angona
Fanaraha-maso ny vakiteny
Unsubscribing avy amin'ny gazety
Checker e-mail ho an'ny fisiana
Manoro hevitra anareo izahay mba hampiasa fitaovana ity mba hanamarina ny mpandray ' adiresy alohan'ny mailing list sy ny ahi-dratsy Martie ny adiresy mailaka ho an'ny famonjena ny loharanon-karena.
Azo atao dia midika hoe ny fanamarinana
Jereo ny syntaxe
mamela anao mba hanamarinana ny tsipelina ao amin'ny adiresy mailaka. Tsy mijery DNS server ary mail server ' ny mpandray.
ny taratasim-bola ao amin'ny firaketana an-tsoratra ny DNS lohamilina noho ny fisian ' ny firaketana an-tsoratra ny mpandray sehatra. Manoro hevitra anareo izahay mba hampiasa izany fanamarinana fomba, miaraka amin'ny maso ny syntaxe.
ny taratasim-bola eo amin'ny mail server ' ny mpandray, izay no tena marina sy azo itokisana ny fitsapana ny fisian'ny pochtovo box, nefa Soriano amin'ny sasany amin'ireo saro sy ny zava-tsarotra.
Ohatra: Tsy maintsy ho fotsy IP, toy ny mahazatra indrindra lahatsoratra asa fanompoana mail.ru mitaky ny mampifandray azy, afa-tsy ny fotsy IP. Nandritra XMailer mamokatra ny adiresy mailaka lohamilina ao anatin'ny ezaka mba hianatra momba ny fisiany manokana e-mail adiresy, dia afaka ho voarara ho an'ny matetika fitsaboana.
Tiako ny manamarika fa raha raha mijery ny fidirana dia handray ny valiny momba ny ny fisian ' ny mpandray ny adiresy, ary izany dia tena miasa any. Fahazoan-dalana isika mba hampiasa izany fomba mba hijery ny lisitry hatramin'ny 1000 adiresy ao ny andro.
Ny tolo-kevitra ho amin'ny famoronana toetra ny mailaka newsletters eto.
Ny fanavaozana ao XMailer 3.0. Ahoana no mba hitsambikina-manomboka ny gazety? Ny valiny eto.
Sivy fitsipiky ny fizarana mahomby.
Ny olana amin'ny tapakila.
Ahoana no mba hanoratra taratasy varotra ho an'ny dokam-barotra?
Ahoana no tapaka hahazo ny Inbox?
Ny vidin'ny fahazoan-dalana XMailer III
Fampahafantarana ny mari-pamantarana
Ny tolo-kevitra ho amin'ny famoronana toetra ny mailaka newsletters eto
Ny fanavaozana ao XMailer 3.0. Ahoana no mba hitsambikina-manomboka ny gazety? Ny valiny eto
Sivy fitsipiky ny fizarana mahomby
Ny olana amin'ny tapakila
Horonan-tsary amin'ny XMailer 3.0
Fanamarihana sy soso-kevitra ho an'ny XSpamer